porn recover အဘို့အတှေးတောဆငျခွ - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
နေ့စဉ်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရသောမည်သူမဆိုအတွက်အလွန်သက်သာရာရနိုင်သည်။ (မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းမှထုတ်ပယ်ခြင်းသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားသည်။ ) သုတေသနပြုချက်ကနေ့စဉ်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းသည် ဦး နှောက်၏ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုင်ရာအပိုင်းကို frontal cortex ဟုခေါ်သည်ကားမောင်းသူ၏ထိုင်ခုံတွင်နေရန်အထောက်အကူပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ willpower ၏ထိုင်ခုံဖြစ်သော frontal cortex သည်ပြင်းထန်သောစွဲလမ်းမှုတွင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အရွယ်အစား (hypofrontality) တွင်ကျဆင်းသည်။ တရားအားထုတ်ကတည်းက ပိုကြီးတဲ့တိုကျရိုကျ cortex posses, ဖျန်ဖြေကထကြွလွယ်သောအပြုအမူကိုမောင်းသောဦးနှောက်၏စရိုက်အစိတ်အပိုင်းများ quiets သကဲ့သို့, အားနည်းခဲ့ရာစွဲခိုင်မာစေရန်ပုံပေါ်ပါတယ်။ တဦးတည်းဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကဤနည်းအားအကျဉ်းချုံး:
တသမတ်တည်းတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်သိသိသာသာပိုမိုတက်ကြွသောတိုကျရိုကျအပိုငျးဒေသမြားတှငျနှေးကွေးသောခြေလက်အင်္ဂါစနစ်သို့သိသိသာသာပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သိသိသာသာသတင်းအချက်အလက်များရှိသည်။ သင်စဉ်းစားမိပါကစွမ်းအင်ပြည့် ၀ သော frontal / pre-frontal lobobe သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပျော်ရွှင်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ စွမ်းအားရှိမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ အလွန်များပြားသော limbic system သည်စိတ်ကျရောဂါ၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ အမျက်ဒေါသ၊
ဒီမှာအခမဲ့ပါ တရားအားထုတ်ရန်နှင့်အတူကူညီပေးမည့် NoFapper အားဖြင့်ပလီကေးရှင်း.
တရားအားထုတ်ရန် technique ကိုသင်ယူရုံ 11 နာရီ, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသူတို့ရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီအပြုအမူထိန်းညှိကူညီပေးသည်သောဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက်ထိရောက်မှုတိုးမြှင်ခြင်းဖြင့်ဦးနှောက်ဆက်သွယ်မှုအတွက်အပြုသဘောတည်ဆောက်ပုံအပြောင်းအလဲများ induces သုတေသီများသတင်းပို့ပါ။
ဘာဝနာပြထားပြီး 65% ပျမ်းမျှအားဖြင့် dopamine အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်။ စွဲ desensitization သို့မဟုတ်နာတာရှည်အနိမ့် dopamine အချက်ပြဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ (သက်ဆိုင်ရာသုတေသနများအတွက်, စာမျက်နှာ၏ခြေမမှာဆောင်းပါးတွေကိုကြည့်ပါ။ ဒါ့အပြင်တွေ့မြင် ED reverse မှတရားအားထုတ်အသုံးပြုခြင်း.)
တှေးတောဆငျခွ တိုးအဖြူကိစ္စ ဦး နှောက်၏ anterior cingulate ဒေသတွင် (myelin) ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ anterior cingulate cortex ၏ activation အတွက်လိုငွေပြမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် စှဲမွဲမှု, အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှုရောဂါ, စိတ်ဖောက်ပြန်, စိတ်ကျရောဂါ, schizophrenia နှင့်အခြားရောဂါများ။
သာ 8 ရက်သတ္တပတ်ပုံမှန်တရားအားထုတ်အတွက် အဓိကတိုးနှိုးဆွပေး အဆိုပါ hippocampus အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆ, Self-အသိအမြင်, သနားခြင်းကရုဏာစိတ်နှင့်အတှငျးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုအတွက်ပါဝင်သူ-အစီရင်ခံလျှော့ချလည်းဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်စိုးရိမ်စိတ်နဲ့စိတ်ဖိစီးမှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှလူသိများသော amygdala အတွက်မီးခိုးရောင်-ကိစ္စသိပ်သည်းဆလျော့နည်းသွားသည်။
အသက် ၃၅ - Zazen နည်းလမ်းဖြင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားနိုင်သည်
ငါ၏အညစ်ညမ်းစွဲကုသ 10 နေ့ကဘာဝနာသင်တန်း
လက်ရှိပြေးပွဲကိုမစတင်မီငါအပတ်တိုင်းပြန်ဖြစ်လာသည်။ တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်။ အတွေးတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်မလိုအပ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုအနည်းငယ်ပေးခဲ့တယ်။
အရာရာတိုင်းသည်ဤနည်းအတိုင်းဖြစ်သောကြောင့်အရာရာတိုင်းသည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ဘဝကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ် ဘ ၀ ဆိုတာ“ အတ္တ” ပဲ။ သို့သော် nofap၊ တွေးတောဆင်ခြင်မှုနှင့်အသိပညာများကြောင့်လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအရာများကိုမဖော်ပြနိုင်ပါ။ သိပ္ပံပညာကရှင်းပြနိုင်တာထက်ဘဝမှာအများကြီးပိုများတယ်။ တကယ်တော့အရာဝတ္ထုတွေကိုရုပ်ပုံတွေငါ့ ဦး နှောက်ကိုဖြတ်သန်းသွားရုံမျှမကပဲမြင်တယ်။ ကျွန်ုပ် ဦး နှောက်မှတဆင့်အသံများနှင့်ဆူညံသံများသာကြားရရုံထက်အရာများကိုကြားနိုင်သည်။ အရာအားလုံးဟာဒီလောက်အသက်ရှင်နေလို့စကြဝuniverseာကလှည့်ပတ်သွားသလိုပဲ သငျသညျ 🙂
ငါ2ရက်သတ္တပတ် + များအတွက် NoFap + ဘာဝနာပြုပါအရာတိုင်းကိုငါကယ့်ကိုအကောင်းကံ get ကျိန်ဆို။ သငျသညျခဏ NoFap နှင့်ဘာဝနာပြုကြသောအခါနတ်မင်းကြီးတပ်ဖွဲ့များသင်သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုနှင့်အတူ align နဲ့တူငါခံစားရတယ်။ ငါအတိတ်တစ်နှစ်အတွင်းအတွက်လုပ်ခဲ့တယ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျွန်မ3အလုပ်ပျက်ကွက်အင်တာဗျူးနှင့်အလုပ်အကိုင်လိုက်စား၏အကြောင်းကို3လအကြာကမ်းလှမ်းတယ်။ ငါ nofap လုပ်ခဲ့တဲ့ 2nd အချိန်, ငါ့သူဌေးအပြာရောင်ထဲကပိုကောင်းတဲ့အနေအထားမှငါ့ကိုမပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းလူတို့နှင့်အတူပိုကောင်းဖြစ်၏ ငါပြောဆိုမှုများအတွက် passive ထက်ပိုမိုတက်ကြွသောဖြစ်၏ ငါ၏အဦးနှောက်, တစ်သိန်းနှင့်ခြုံငုံပီသသော သာ. ကောင်း၏; ငါ၏အဦးနှောက်အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါတယ်တူသောနှင့်ငါ [မွေးမြူ] ခံစားရတယ်။
သငျသညျ masturbate မီအမြဲတမ်းတွေးတောဆင်ခြင်ပါ။ အစားသငျသညျလုံးဝသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်ယောင်ဟန်ဆောင်သင့်ရဲ့အားနည်းအချိန်လေးထိန်းချုပ်ပါ။ (နည်းလမ်းအသေးစိတ်ကိုဤနေရာတွင် Read.)
တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းကကျွန်မကိုအများဆုံးကူညီပေးခဲ့သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာမရှောင်ဝဲနိုင်ခဲ့ပါ။ သို့သော်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အမြဲထာဝရတည်ရှိနိုင်ပုံရသည်။ ယင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသတိပြုမိရန်ပင်ကြာမြင့်စွာမယူပါ။ တစ်နေ့ ၁၀ မိနစ်တွေးတောဆင်ခြင်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်ပိုမိုပြင်းထန်သောအာရုံစူးစိုက်မှုအသိကိုလည်းသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။
နံနက်ယံ၌တွေးတောဆင်ခြင်သောအခါကျန်တစ်နေ့လုံးကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်ပေါ်ပေါက်လာသည့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုသတိပြုမိလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုရပ်တန့်ရန်လွယ်ကူပြီးလိုက်နာရန်လည်းမလွယ်ကူပါ။ ငါစိတ်ကူးယဉ်အတွေးအခေါ်အတိုင်းလိုက်လျှောက်လေ၊ ကျွန်ုပ်ပိုမိုပါ ၀ င်လေလေ၊ ရပ်တန့်ရန် ပို၍ ခက်ခဲလေလေဖြစ်သည်။ အဆုံးတွင်ဤသည်သည်ပြန်လည်သက်ရောက်သွားသောကြောင့်စိတ်ကူးယဉ်မှုကိုစောစီးစွာဖမ်းယူခြင်းသည်အဓိကကျသည်။ ရိုးရိုးတွေးတောဆင်ခြင်ရုံမျှသာဖြစ်သည်။
တတ်နိုင်သမျှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှု go အသက်ပြင်းပြင်းရှူ၏စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်ကုန်အံ့။
, အသက်တော်ပေါ်တွင်နှာခေါင်း / ပါးစပ်မှာအာရုံခံစားမှု, သို့မဟုတ်ရင်ဘတ်၏တက်နှင့်အကျဖြစ်စေအာရုံစိုက်ပါ။
စိတ်ကို wanders သောအခါ, အသက်ရှုဖို့ကနောက်ကျောဆောင်ခဲ့ရမည်။
အကြောင်းကို 10 မိနစ် Continue ။
၁၀ မိနစ်လောက်အကြာမှာငါ့စိတ်ဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူလှည့်လည်သွားလာနိုင်တယ်။ သို့သော်၎င်းသည်ပြaနာမဟုတ်ပါ၊ အသက်ရှုခြင်းကိုအာရုံစိုက်စေသည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့သော်လည်းတိုက်တွန်းချက်ရှိခြင်းသောအခါငါဒီအလေ့အကျင့်ကိုအကြံပြုကြဘူး။ ငါတစ်ချိန်ကကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါလုပ်ခဲ့တာကကြီးထွားဖို့တိုက်တွန်းချက်တွေပိုများလာဖို့ပဲ။ ၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာတိုးပွားစေရန်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါမယ့်အစားသငျသညျဆငျခွငျဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူသင့်တယ်, သင်သည်သင်၏စွဲဖြတ်အကြောင်းကိုမစဉ်းစားသင့်ကြောင်းဟုဦးတည်းဝိညာဉ်ရေးရာမာစတာကြား၏။ ပိုငျသအားကောင်းသငျ့စိတျဖြစ်လာသည်နှင့်ဆီးအတားမရှိသင့်ရဲ့စွဲရရှိသွားတဲ့တွေးတောဆင်ခြင်ပါ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို calms ကတည်းကဒါကြောင့်ငါသည်ငါ၏တရားအားထုတ်အချိန်တိုးမြှင့်ခဲ့ကြပြီး porn နှင့်ပတ်သက်ပြီးအကြံအစည်အကြီးအကျယ်လျှော့ချပါပြီ။
ငါပုံမှန်တရားအားထုတ်ခြင်း“ စစ်အစိုးရ” ကိုရယူပြီးအသက်ရှူနည်းစနစ်နှင့်အခြေခံယောဂကျင့်စဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်၏နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းတွင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကြိမ်နှုန်းကိုဆယ်ဆကျော်မြင့်တက်စေခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ပူးတွဲဖိုင်များအားနည်းလာပြီးအချို့ပင်ပျောက်ကွယ်သွားသည်ဟုခံစားရနိုင်သည်။ အတိတ်ကကျွန်ုပ်အားစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ပြproblemsနာများဖြစ်စေသောအရာအချို့သည်ယခုကျွန်ုပ်အားလုံးဝစိတ်မဝင်စားပုံရသည်။ လျစ်လျူရှုမှုရောက်လာပြီ - ငါအရင်ကလိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမတုန်လှုပ်ဘူး။
iPhone app - နယ်စည်းမခြားတွေးတောဆင်ခြင်မှု - လေးပတ်ကြာလမ်းညွှန်မှုသင်တန်း။ ငါအရမ်းကောင်းတယ်
ငါ 13 လကြာအောင်တသမတ်တည်းတှေးတောဆငျခွ။ ငါ MO ကိုသိသိသာသာလျှော့ချ (90% လျော့နည်း?) ။ တခါတရံငါလစုံတွဲတစ်တွဲသွားပါကနားလည်သဘောပေါက်ကြဘူး။ ငါဖြစ်စေ porn ကိုကြည့်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအချက်သည်ကျွန်ုပ်၏တွေးတောဆင်ခြင်မှုကြောင့် (တစ်ရက်လျှင်နှစ်ကြိမ် ၁၅ မိနစ်ခန့်စီ) ရှိသည်။
ငါတသမတ်တည်းတွေးတောဆင်ခြင်သည့်အခါကျွန်မနောက်ကွယ် (pre-တိုကျရိုကျ cortex) porn စွန့်ခွာရန်ရှိသည်သိတယ်ငါ့ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းကိုပိုပြီးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်။ ကျွန်မမှန်မှန်တွေးတောဆင်ခြင်ကြဘူးသောအခါ, ပျင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်လမ်းအဖြစ် PMO သုံးစွဲဖို့ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်အတူတက်လာသောငါ၏စိတ်အပိုင်းကိုပိုပြီးတော့ဘူးရှိပါတယ်။ ဒါကတစ်ဦး oversimplification ဖြစ်နိုင်သည်သို့သော် PMO ကျော်လွှားရန်စစ်တိုက်ရာတွင်စာသား pre-တိုကျရိုကျ cortex နဲ့ဦးနှောက်ပိုစိတ်ခံစားမှု, reactive အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဆင်ခြင်တုံတရား, စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားတစ်ဦးသည်စစ်တိုက်ကြောင်းကိုပုံရသည်။ တှေးတောဆငျခွဖြစ်ကောင်းကားမောင်းသူရဲ့ထိုင်ခုံအတွက် Pre-တိုကျရိုကျ cortex ချပြီးများအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
ပိုငျသညျခရီးနှင့်ကျရှုံးမှု၏အလားအလာကိုစဉ်းစား, စိတ်ဖိစီးမှုထတည်ဆောက်ကာ relapse ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ တှေးတောဆငျခွငါ့ကိုအရမ်းစိတ်ကိုပေါ် PMO မပါဘဲခရီးသယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာငါ့ကိုပြုမိပြုခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်သောအရာကိုရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ယခင်ကြိုးစားမှုနဲ့အတူသူတို့သွားသွေးပေမယ့်ဘို့ရေရှည်ကျော်ရရှိရန်မည်သို့အတော်လေးသေချာမသိကြကြသူလူတို့အဘို့, တရားအားထုတ်ယင်းပျောက်ဆုံးနေ link ကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဤတွင် site ကိုအဖွဲ့ဝင်များကအကြံပြုအချို့ဆင်ခြင်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျနေ့စဉ်သုံးစွဲခြင်းကနေ သာ. ကြီးမြတ်ရလဒ်တွေကိုမြင်လိမ့်မည်။
ကနေအကြံပြု apps များ ဤကွီးစှာသောဆောင်းပါး စွဲလမ်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအပေါ်:
iPhone အက်ပလီကေးရှင်းများ - Breathpacer (www.Breathpacer.com) နှင့် Saagara (www.Saagara.com)
•အသက်ရှူ-1 CD ကို (တစ်မိနစ်ကိုငါးအသက်ရှူဖို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အသက်ရှူ paceswww.coherence.com)
•ကွန်ပျူတာဂိမ်းများ - HeartMath (www ။ HeartMath.com) နှင့်တောရိုင်းဘုရားသခငျ့မှခရီး (www.wilddivine.com/servlet/-strse-72/The-Passage-OEM/Detail)
• Resperate devices များ (တစ်မိနစ်လျှင်သုံးအသက်ရှုဖို့အသက်ရှူနှေးနိုင်ပါတယ်www.resperate.com)
• Alpha-Stim (ဖွငျ့ Cranial electrotherapy က stimulatorwww.Alpha-stim.com) နှင့် FisherWallace (www.FisherWallace.com).
ဒါကစာအုပ်အပေါ် အခြေခံ. တစ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောတရားထိုင်ဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါအပန်းဖြေတုံ့ပြန်မှု. အွန်လိုင်း Listen.
ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်: ငါသတိဘာဝနာကျင့်သုံး, ငါအရမ်းအထောက်အကူရှာပါ။ ထိုသို့သောရိုးရှင်းတဲ့အရာဒီတော့အစွမ်းထက်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်အံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။
ဤ site အင်တာနက်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံး Open-source ကိုဘာဝနာအရင်းအမြစ်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအများအပြားကောင်းစွာ-rounded နည်းစနစ်ပေးထားပါတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်လုပ် သတိသမ္ဘာဝနာ တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာအစဉ်အလာဖြစ်သည်။
"ဟုအဆိုပါ Hara နှစ်ခုလက်မခါးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်ပေါ်တွင်စွမ်းအင်အာရုံစိုက်။ တဘဝထဲသို့ဝင်ခြင်းနှင့်တဦးသေဆုံးနှင့်အသက်တာ၏ထွက်ဝင်ရှိရာကနေဗဟိုရှိရာကနေဗဟိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအကြားအဆက်အသွယ်စင်တာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလက်ဝဲနှင့်လက်ယာအမ်းအမ်းတစ်မျိုးခံစားရနှင့်သင့်စင်တာသည်အဘယ်မှာရှိသင်သိမထားဘူးဆိုရင်, ထိုရိုးရှင်းစွာသင်အဆက်အသွယ်ဖန်တီးရန်ရှိသည်ဒါကြောင့်သင်, သင့် Hara နှင့်အဆက်အသွယ်မရှိတော့ဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ "
ဘယ်အချိန်မှာ: ညဉ့်တွင်, သငျသညျနံနကျ / ပထမဦးဆုံးအရာအိပ်သွားရသည့်အခါ။
Duration: 10-5 မိနစ်။
1 အဆင့်: အ Hara Locate
2 Step: အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါ!
"အသက်ရှူနက်ရှိုင်းသောအသက်ရှူစတင်ပါ။ သငျသညျထနှင့်အသက်ရှူနှင့်အတူဆင်းလာမယ့်ကြောင်းစင်တာခံစားရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကျုံ့နှင့်ကျုံ့နှင့်ကျုံ့ခြင်းနှင့်သင်ရုံငယ်လေးတစ်စင်တာကဲ့သို့ရှိတည်ဆဲနေကြတယ်, အလွန်စုစည်းစွမ်းအင်လျှင်ကဲ့သို့ရှိသင့်ရဲ့တပြင်လုံးကိုစွမ်းအင်ခံစားရတယ်။
3 Step: ဦးအိပ်စက်ခြင်းနေချိန်မှာရေးစင်တာ!
"သူကလုပ်နေတာအိပ်ပျော် Fall - ကြောင်းအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုအခါတပြင်လုံးကိုညဥ့်ကြောင်း Center ဆက်ရှိနေသေး။ နောက်တဖန်ပြန်သတိလစ်သွားသည်ထိုစင်တာ။ ဒီတော့တပြင်လုံးကိုညဥ့်သည်သင်၏မသိဘဲ, သင်စင်တာနှင့်အတူနက်ရှိုင်းအဆက်အသွယ်နည်းလမ်းများစွာအတွက်လာမယ့်ပါလိမ့်မည်။
4 အဆင့်: အ Hara နှင့်အတူပြန်လည်ချိတ်ဆက်
"နောက်တစ်နေ့နံနက်မှာ, သင်အိပ်ပျော်ခြင်းသွားပြီလို့ခံစားရကြောင်းယခုအချိန်တွင်, ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့မျက်စိမဖွင့်ဘူး။ တနည်းကား, အဲဒီမှာသင့်ရဲ့လက်ကိုတင်ကိုအနည်းငယ်တွန်းအသက်ရှူခြင်း, start; ထပ် Hara ခံစားရတယ်။ 10-5 မိနစ်ဤသို့ပြုပြီးတော့တက်ရပါတယ်။
"နံနက်တိုင်း, ညစဉ်ညတိုင်းဒီလုပ်ပါ။ သုံးလအတွင်းသင်ခံစားမှုဗဟိုပြုစတင်ပါလိမ့်မည်။
"ဒါဟာမဟုတ်ရင်တဦးတည်း fragmentary ခံစားရမယ့်ရေးစင်တာရှိသည်ဖို့အလွန်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်, ထို့နောက်တဦးတည်းအတူတူမဟုတ်ပါဘူး။ တဦးတည်းပဲ jigsaw ကဲ့သို့ဖြစ်၏ - အားလုံးအပိုင်းအစများနှင့်မ gestalt မဟုတ်ဘဲတစ်ဖွဲ့လုံး။ ဗဟိုမပါဘဲလူတဆွဲယူနိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်မချစ်နိုင်သောကြောင့်ဒါဟာမကောင်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟိုမရှိရင်သင်သည်သင်၏အသက်တာ၌လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အမှုအရာလုပ်နေတာပေါ်သွားနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကဖန်တီးမှုဖြစ်ဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနိမ့်ဆုံးနထေိုငျပါလိမ့်မယ်။ အများဆုံးသင်တို့အဘို့ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သာ ဗဟိုပြု. အားဖြင့်တဦးတည်းထှတျအထိပျမှာ, အထွတ်အထိပ်မှာ, Zenith မှာအများဆုံးမှာအသက်ရှင်လျက်, သောသာလူနေမှုတစ်ဦးကိုမှန်ကန်အသက်ပေတည်းထားဘူး။
စွမ်းအင်ဦးခေါင်းမှမရွှေ့ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "ဥပမာက Hara ကိုသွားပါလိမ့်မယ်, ဒီထက်စဉ်းစားတွေးခေါ်ရှိရလိမ့်မည်။ ပိုငျသ Hara စဉ်းစား, ပိုငျသညျအဲဒီမှာအာရုံစူးစိုက်, ပိုငျသညျသငျ၌ပေါ်ပေါက်နေတဲ့စည်းကမ်းကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အတင်းအကျပ်ခံရဖို့မထားပါဘူးဒါကသဘာဝလာပါတယ်။
"ဒီကပိုသင် Hara သတိပြုမိကြသည်, ထိုနည်းသည်ကိုသင်ဘဝနှင့်သေခြင်း၏ကြောက်လန့်ဖြစ်ရလိမ့်မည် - ဘဝနှင့်သေခြင်း၏ဗဟိုကြောင့်။ သင် Hara စင်တာမှ attuned ဖြစ်လာပြီးတာနဲ့သင်ကသတ္တိရှိရှိနထေိုငျနိုငျသညျ။ ရဲစွမ်းသတ္တိကြောင့်ထဲကပေါ်ထွန်း: လျော့နည်းစဉ်းစားတွေးခေါ် ပို. တိတ်ဆိတ်နည်းထိန်းအကွပ်မဲ့အချိန်လေး, သဘာဝစည်းကမ်း, ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်အမြစ်တွယ်နေတဲ့ grounded "။
သင်တို့သည်ဤစကားကိုနားထောငျနိုငျသညျ ပဲ့ထိန်းဆင်ခြင် အွန်လိုင်း။ ဤရွေ့ကား Thich Nhat Hanh ရဲ့အစဉ်အလာကနေလာပါတယ်။
တှေးတောဆငျခွရန်အ Beginners လမ်းညွှန်
Joan Borysenko ရေးတဲ့ဒီစာအုပ်ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စတင်လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။ Overdrive ရှိအများပြည်သူစာကြည့်တိုက်အကောင့်မှဒီနှစ်နာရီကြာတဲ့ဒီအော်ဒီယိုစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ကူးယူနိုင်ခဲ့တယ်။
Tai Chi ကိုဗီဒီယို
သင့်ရဲ့ဝမ်းကိုဖြည့်ရှူရှိုက်မိပါ: အ Wave ကိုရူသင်ယူခြင်းအားဖြင့်စတင်ပါ။ (ဒူး ထောက်. နှင့်ကြမ်းပြင်ဆီသို့ဦးတည်ဆီးခုံမို့မို့) သင့်ဝမ်း၏အဆာရှေ့ဆက်သင့်ရဲ့ထွင်ထားတဲကျောက်ကြပါစို့။ သင့်ရဲ့ဝမ်းအပြည့်အဝဖြစ်တဲ့အခါ, သင့်ရင်ဘတ်ချဲ့ထွင်ရန်ဓာတ်များကိုစောင့်ရှောက်။ သင့်ရဲ့ဝမ်းပြားစေခြင်းနှင့်ထွင်ထားတဲမြင့်တက် (ဆီးခုံမို့မို့တက်နှင့်သင့်ဝမ်း button ကိုဦးတည်) စတင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကုတျပေါ်တွင်သင်၏ဝမ်းဂူလေထုနှင်ထုတ်ဖို့စတင်သည်။ သင့်ရဲ့ရင်ဘတ်တစ်ခုပြီးပြည့်စုံပြိုကျအတူပြီးအောင်လုပ်ပါ။
တခါတရံထွက်သက်သည်အခြားအချိန်များတွင်ရှည်လျားနှေးကွေးခြင်းနှင့်မြန်ပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်တင်ပါးဆုံတွင်း / ကျောရိုးလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူစစ်မှန်သော, တစ်ခါတစ်ရံလှုပ်ရှားမှုကြီးတွေနှင့်တခါတရံအသေးစားဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါသည်ပစပ်ကိုအားဖြင့်, ငါ၏နှာခေါင်းမှတဆင့်ထုတ်ကိုရှူရှိုက်လို။ သေးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်, ငါပွင့်လင်းလျှော့ပေါ့ငါ့နှုတ်ကိုစွန့်ခွာ, ငါ့နှာခေါင်းမှတဆင့်ရှူဖို့ငါ့ခံတွင်း၏ခေါင်မိုးမှငါ့လျှာမြှင့်။ ထိုအခါကကုတျအတှကျအစက်စက်ကြကုန်အံ့။
လိုအပ်မယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့နောက်ကျော, သင့်ဒူးထောကျအောကျခေါင်းအုံးပေါ်အိပ်ရကြ၏။ တစ်ဦးကအပျော့မျက်နှာပြင် (အိပ်ရာ) ကိုပိုပြီးတင်ပါးဆုံတွင်းလှုပ်ရှားမှုအဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရင်ဘတ်စွန်ပလွံချပေါ်တွင်သင်၏လက်၌ကြွင်းသောအရာတို့သည်သင်တို့၏ sternum (ရင်သားအရိုး) အိပ်အဖြစ်လက်ညှိုးအကြံပေးချက်များနီးပါးထိ။
သင်၏နှလုံးထဲအနက်ရှိုင်းဆုံး၊ ကုသမှု၊ သင်ရှူရှိုက်မိသောအခါ ၀ မ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ဘုရားအားခေါ်ပါ“ အိုး ___” ဟုပြောပြီးထိုဘုရား၏အလင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သင့်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ သင့်ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုတိုးချဲ့ဖို့ရှူရှိုက်မိခြင်းအဖြစ်; သင်၏နှလုံးကိုဖော်ထုတ်ရန်သင်၏နံရိုးလှောင်အိမ်သည်ဖွင့်လိုက်သကဲ့သို့သင်၏လက်ချောင်းများသည်မည်သို့ပျံ့နှံ့နေသည်ကိုသတိပြုပါ။ "ငါ့နှလုံးကိုဖွင့်ပါ" လို့ပြောပါ
ယခု (ကျွန်ုပ် Lama Yeshe စာဖတ်ခြင်းမှ“ Tantra သို့နိဒါန်း - အလိုဆန္ဒပြောင်းလဲခြင်း” အခန်း ၁၀) သင့်ဝမ်းသည်ဆွန်း ဖြစ်၍ ရင်ဘတ်တွင်ပြည့်နေသည်။ အရာအားလုံးပြိုကျခွင့်။ တိုင်းကြွက်သားငြိမ်သို့လျှော့ပေါ့။ သင့်ရဲ့ရင်ဘတ်ကျဆင်းသွားအဖြစ်သင်၏လက်ချောင်းအတူတူပြန်လာကြ၏။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်ငြိမ်သက်သွားသည်။ “ ငါသေချိန်ရောက်ပြီ” လို့ပြောပါ ဒီနေရာမှာလှုပ်ရှားမှု၊ နေသမျှကာလပတ်လုံးအဆင်ပြေဘို့ဤအသေကောင်အာကာသအတွင်းနေပါ။ ဒါမင်းသေတာပဲ ဘာမှမကျန် အဘယ်အရာကိုမျှတန်ဖိုးကိုသို့မဟုတ်အရေးပါမှုရှိပါတယ်။
သငျသညျအောက်စီဂျင်မရှိခြင်းကနေစိတျပူပဖြစ်လာရှေ့တော်၌ထိုသံသရာကိုကျော်စတင်ပါ။ သင့်ရဲ့ inbreath နှင့်အတူအသက်တာသစ်နှင့်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြည့်ပါ။
သင်မထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုသင်စိတ်ပူနေပါက၎င်းကိုသင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်၊ မထိန်းချုပ်နိုင်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်အကြံပေးခြင်းသို့မဟုတ်အကြံပေးခြင်းကိုရယူခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးနောက် ၂ သို့သို့မဟုတ် ၃ သို့ပြန်သွားပါ။
အကယ်၍ ၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်အမျိုးအစားထက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုခံစားချက်တစ်ခုထက်ပိုမိုလျှင်၎င်းသည်မကောင်းမှုကိုမဟုတ်ဘဲကောင်းသောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်လိုသောဆန္ဒဟုသတ်မှတ်ခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။ မည်သည့်အခါမျှမလိုအပ်ဘဲအနုတ်လက္ခဏာတစ်ခုခုနှင့်အတူအချိန်မရွေးနီးပါး။
တစ်စုံတစ်ခုနှင့်လုံး ၀ မသက်ဆိုင်သောစိုးရိမ်စိတ်ကိုကိုင်တွယ်သောအခါသင်၏အစာအိမ်ကြီးထွားလာပါကသင်၏အစာအိမ်သည်အစာအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြောင်းသင်ယုံကြည်နိုင်သကဲ့သို့၎င်းသည်၎င်းအားအပြုသဘောဆောင်သည့်အရာနှင့်ဆက်စပ်ရန်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်။
ငါ "horny" ခံစားရသည့်အခါငါဖြစ်ထွန်းသောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ပြီးဖြည့်စွက်ရန်အလိုရှိကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ခြင်း (ပြီးဆုံးခြင်းသည်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိခြင်း) ။
Ultimate Om - Jonathan Goldman မှ Astral အလင်း on Vimeo.
Rhapsody ပေါ်ရှိသီချင်းတစ်ပုဒ်လုံးကိုသင်အခမဲ့နားထောင်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုသင်ကူညီလျှင်၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် .99 သာသာရှိသည်။ Rhapsody - Ultimate Om
ဒီဟာကဘယ်လောက်အရူးစီးတာလဲ ငါဘယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသွားပြီးဘယ်လိုနာကျင်မှုနဲ့သဘောပေါက်မှုကိုငါတောင်မရှင်းပြနိုင်ဘူး။ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်း၊ မလုံခြုံခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချခြင်း၊ ၁၅ ရက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ ရက်ပေါင်း ၃၀ နီးပါးလောက်မှာပြန်စခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ငါ nofap ရှိညီအစ်ကိုများကိုငါအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်မှုရှိသော၊ လူမှုရေးအရသတိထားမိပြီးအရေးအကြီးဆုံးမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှည့်စားခြင်းမရှိသောဇင်ပြည်နယ်တွင်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောနိုင်သည်။
ငါ ED သွေးဆောင် Porn ကုသပေးဖို့ nofap နဲ့စတင်များနှင့်လည်းစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်ဖယ်ရှားပစ်ရချင်တယ်။ ငါမှမိတ်ဆက်ခဲ့သည် / r / တှေးတောဆငျခွ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်မှုကိုကူညီပေးတယ်။ သတိမရှိခြင်း၏အခြေအနေတွင်ရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ထူးဆန်းပုံရသည်။ သို့သော်ယခုငါသတိမဲ့နေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝတွင် nofap၊ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၊ မိန်းကလေးများသို့မဟုတ်လေ့လာနေခြင်းများကိုအာရုံစိုက်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ (၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပျော့ပျောင်းသော ADD ပြproblemနာကိုပျောက်စေသည်ဟုမပြောနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ပြproblemနာဖြေရှင်းခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအရကျွန်ုပ်ကိုများစွာကူညီသည်။ )
သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ဘာဝနာအရှိဆုံးငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်၌ငါ့အတွင်းစိတ်မိမိကိုယ်ကို porn, fapping နှင့် ED နှင့်အတူအပြင်းအထန်အတူညှိနေပါသည်အားလုံးတော်တော်များများငါ့အဘို့တူညီတဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုဈ PMO နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် numbing အားဖြင့်ထိခိုက်စေခံရခြင်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကာကွယ်ခဲ့သည်ဖြစ်ခဲ့သည်။
မရှိတော့ပါ။ ယခုတွင်ငါသည်နေ့စဉ်နီးပါးတွေးတောဆင်ခြင်သည်နှင့်အရာရာသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာကျွန်ုပ်လုပ်နေသည့်အရာများအားကြည့်ရှုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ငါအလိုတော်နှင့်နီးကပ်စွာဤဇင် mode မှာဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ဤသည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခံစားချက်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသယ်ဆောင်ပုံသည်လုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီ။
Absolute zen၊ အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့၊ အာရုံစူးစိုက်မှုအပြင် nofap ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်တာကကျွန်တော့်ကိုရုန်းကန်ရမယ့်နောက်အဆင့်တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။
ဒီအတွက်ငါဇာတ်ကြောင်းရဲ့အပိုင်းကိုဒီအသိုင်းအဝိုင်းကိုမျှဝေချင်တယ်။ ဒီခရီးစဉ်ရဲ့ပန်းတိုင်ကဘာပဲဖြစ်ပါစေအတူသွားပါ။ အဆုံးမှာတော့မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာလိမ့်မယ်။ သင်ရုံ porn အားဖြင့်မျက်စိကန်းခဲ့ကြသည်။ ကံကောင်းပါစေ၊
neuroscience နှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ပညာကနေပြန်လည် reboot လုပ်နှစ်ခုအထောက်အကူဖြစ်စေအရင်းအမြစ်များကို:
Rick Hanson ရဲ့အလုပ်မှာ ဦး နှောက်ကိုဘယ်လိုပြန်လည်ကောင်းမွန်လာအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲစေတဲ့ရှင်းပြချက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓကအသီးကိုယူရန်နည်းလမ်းအဖြစ်ယူရန်သွန်သင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာအပြုသဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများကိုအားဖြည့်ရန်စိတ်လေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ်အပြုသဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများကိုသုံးပါ။
သတိသမ္ဘာဝနာ: 10 မိနစ်တစ်ရက်သိမြင် function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်
(လိင်စွဲလမ်းသူတစ် ဦး မှ)“ သတိရှိရှိတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အားမည်သို့ကူညီခဲ့သနည်း” ဖြစ်သည်။
သင်တစ်ဦးထက်ပိုသောသနားကြင်နာတတ်တဲ့သူတစ်ဦးပါစေ meditation နိုင်သလား?
တရုတ်သတိဘာဝနာဦးနှောက်အဖြူကိစ္စ (2012) တွင်နှစ်ဆအပြုသဘောလာကြတယ်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်
စိတ်ကျရောဂါ - စိတ်ကိုအခြေခံသည့်ကုထုံးသည်ကတိကိုပြသည်။
တှေးတောဆငျခွ Proving ဟားဗတ်မိတ်ဆက် MRI လေ့လာမှုလုံးကောက် 8 ရက်သတ္တပတ်များတွင်အဆိုပါဦးနှောက်ရဲ့ gray matter (2014) Rebuilds
ဝိညာဏ်တရားအားထုတ်-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲကာလအတွင်းတိုးလာ dopamine သေံ။ (2002)
ဘာဝနာဟာဦးနှောက်များအတွက် Push ကို-Up ကိုလား?
အိန္ဒိယတွင်မှတ်ဉာဏ်၏မာစတာသူ့ Brainy Feat အဘို့အတှေးတောဆငျခွ Credits
Meditation Gate - အသုံးမပြုခင်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်ခြင်း (အစတွင်)
တှေးတောဆငျခွလုံးကောက် 8 ရက်သတ္တပတ်များတွင်အဆိုပါဦးနှောက်ရဲ့ gray matter Rebuilds
သတိသမ္ဘာဝနာအဟောင်းတွေလူကြီးများ (2012) တွင်အထီးကျန်မှုကိုလျော့နည်းစေ
ကျန်းမာသောအကျင့်နဲ့ပူနွေး fuzzy အတူ Reprogram: Trump စွဲနှင့် compulsive
ရေရှည်တရားအားထုတ်ခြင်း၏နောက်ခံခန္ဓာဗေဒဆက်စပ်မှု: မီးခိုးရောင်အမှုပိုကြီး hippocampal နှင့်တိုကျရိုကျ volumes ကို (2009)
ယောဂ [တရားအားထုတ်ခြင်း] သည်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ယခုအဘယ်ကြောင့်လူသိများပါတယ်
ယောဂသည်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ အဘယ်ကြောင့် (2012) ယခုလူသိများသည်